गोविन्द केसी र गोपाल पराजुली दुबै चर्चाको शिखरमा छन् । डा.गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानविन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाईसकेपछि र अदालतले समेत पेश गर्न आदेश दिएको सन्दर्भले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । दिएका छैनन्, उनी भन्छन्– मैले संसदीय सुनवाई समितिमा देखाइसके, किन राजीनामा दिने ? यसो भन्दै उनी प्रधानन्यायाधीशको काम गरिरहेकाछन् ।
उनी प्रधानन्यायाधीश हुन्, यसमा शंका छैन । तर उनीमाथि आरोप लागिसक्यो र अदालतले समेत छानबिनका लागि प्रमाण मागिसक्यो भने अदालतको फैसला नआउन्जेल उनले काम गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? यो पेचिलो प्रश्न बनेको छ ।
योभन्दा पनि ठूलो आरोप छ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली माथि । उनी कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च पदमा छन् र कानुनले बर्जित गरेको बहुविवाहको मुद्दामा उनी फसेका छन् । उनको चारवटी श्रीमती रहेछन् । उनलाई अदालतले स्यावासी देला कि दण्डित गर्ला ? योभन्दा कानुनको मजाक अरु के हुनसक्छ ?
र, प्रश्न तत्कालीन संसदीय समितिमाथि समेत तेर्सिएको छ । चार चारवटी श्रीमती भएको उजुरी पर्दा पनि आँखा चिम्लेर संसदीय समितिले कसरी सुनवाई गर्‍यो र मञ्जुरी दियो ? के राजनीतिक प्रभावमा कानुनलाई मिच्न मिल्छ ?
डा.गोविन्द केसीले ठूलै मुद्दा उठाइदिएका छन् र उनले प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने माग अघि सारेका छन् । सरकारले उनको अनसनलाई अर्को सहमति गरेर तोडाएको त छ, त्यो सहमति अब बन्ने सरकारले कार्यान्वयन गर्ला कि नगर्ला ? किनभने एमाले मेडिकल माफियाको पक्षमा पहिले देखि नै लागेको छ ।